OTU ESI EWEPU MKPỌTỤ NA ADOBE AUDITION - ESI MEE - 2019
Otu esi ewepu mkpọtụ na Adobe Audition
Otu n'ime nsogbu ndị kachasị mma na ndekọ ihe bụ ụda. Ndị a bụ ụdị mkpọtụ nile, squeaks, crackles, wdg. Nke a na-emekarị mgbe ị na-edekọ n'okporo ámá, na ụda nke ịkwọ ụgbọ, ifufe na ndị ọzọ. Ọ bụrụ na ị na-eche nsogbu dị otú ahụ, enwela iwe. Adobe Audition na-eme ka ọ dị mfe iwepụ mkpọtụ site na ndekọ site n'itinye naanị ụzọ ole na ole dị na ya. Ya mere, ka anyi bido.
Wepu usoro Adobe Adobe
Otu esi wepu mkpọtụ site na ntinye n'ime Adobe Audition
Ndozi na Mbelata Mwepụ (usoro)
Iji malite, ka anyị tụfuo ederede na-ezighị ezi n'ime usoro ihe omume ahụ. Ị nwere ike ime nke a site na ịdọrọ.
Pịa ugboro abụọ na ndekọ a na òké, n'akụkụ aka nri nke windo anyị na-ahụ usoro egwu n'onwe ya.
Anyị ga-ege ya ntị ma chọpụta nke ngalaba chọrọ nduzi.
Họrọ ebe dara ogbenye na oke òké. Gaa n'elu panel wee gaa tab. "Mmetụta-Mbelata Mbelata-Mbelata Mbelata (usoro)".
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmegharị mkpọtụ dị ka o kwere omume, pịa bọtịnụ dị na windo ahụ. "Wepụ Mmasị Bipute". Mgbe ahụ "Họrọ Njikwa Nile". Na windo a, anyị nwere ike ige ntị na nsonaazụ. Ị nwere ike ịnwale site na ịmegharị sliders iji mezuo oke mkpọtụ.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ ịmalite obere, mgbe ahụ, anyị na-pịa naanị "Tinye". M na-eji nhọrọ mbụ, n'ihi na na mmalite nke ngwugwu m nwere ụzụ na-enweghị isi. Anyị na-ege ntị n'ihe merenụ.
N'ihi ya, mkpọtụ na mpaghara ahọrọ ahọrọ. Ọ ga-adịrị mfe ịkpụ ebe a, ma ọ ga-abụ ihe siri ike na ntụgharị ga-adị nkọ, n'ihi ya, ọ ka mma iji usoro ịkwụsị mkpọtụ.
Idozi na Nwepu okpu Bipute
A pụkwara iji ngwá ọrụ ọzọ wepụ mkpọtụ. Anyị na-egosiputa ihe edemede na ntụpọ ma ọ bụ ihe ndekọ niile wee gaa "Mmetụta-Mbelata Mbelata-Wepụ Ezigbo Mbipụta". Enweghị ihe ọzọ iji guzobe ebe a. A ga-eme ka mkpọtụ ahụ na-akpaghị aka.
O nwere ike ịbụ ihe niile gbasara ụda. Dị ka o kwesịrị, iji nweta ọrụ dị mma, ịkwesịrị iji ọrụ ndị ọzọ dozie ụda, decibels, wepụ olu tremor, wdg. Ma ndị a bụ isiokwu maka isiokwu ndị ọzọ.